March 2017 - Ceelhuur Online
March 31, 2017 admin200
Aabihii baariga ahaa ee lagu Gowracay Gal-Gaduud Cabdi Diiriye Cadaawe (Fadlan aqri) Dadka ku nool Gal-Gaduud abaarta waxaa u dheer gumaadka askarta Itoobiya ee magaca Amisom ku jooga Somalia kuwaas oo tacdi badan ka geystay halkaas labadii sano ee ugu dambeysay. Askarta Itoobiya ee fadhiga kuleh dagmada Ceelbuur ee gobalka Gal-Gaduud ayaa dil arxan daro […]
March 30, 2017 admin156
Culimaa’udiin iyo ganacsato ka socday dalalka Bakistaan iyo tanzaaniya ayaa deeq raashin iyo lacag iskugu jirta gaarsiiyey in ka badan 400 oo qoys oo kamida dadka danyarta ah ee ku nool magaalada Cadaado. isbitaalka guud ee Cadaado ayey booqdeen waxayna dhammaan bukaanadii isbitaalka jiifay gaarsiiyey deeq lacag ah, waxay madaxtooyada Galmudug ee Cadaado kula shireen […]
March 30, 2017 admin169
Madaxweynihii hore Galmudug C/kariin Xuseen Guuleed ayaa markii ugu hireysay ka hadlay doorashada Madaxweynaha Galmudug. Qoraal uu soo dhigay bartiisa Facebookga ayaa u qornaa sidan: TALO SOO JEEDIN Ayadoo laga Anbaqaadayo wararka niyadwanaaga iyo yadadiisha leh ee ka soo baxay Maamulka Ururka.Culumada Ahlu Sunna, lana tixgalinayo taladii Raisu Wasaare Xasan kjeyre, lagana faaideysanayo casharadii laga […]
March 30, 2017 admin147
Ururka dhalinyarada Godinlabe ayaa deeq raashin ah gaarsiiyey 150 qoys oo ah dadka abaartu saameysay. Deeqdaan ayey dhalinyaradu iska aruuriyeen waxayna ugu deeqeen walaalahooda tabaalaysan, dadka deeqda la gaarsiiyey ayaa ka mahad celiyey raashinka la siiyey. Dhalinyarada Godinlabe ayaa kaalin fiican kaga jira gurmadka abaaraha, waxaana deegaanad u hareereysan Godinlabe saameyey jiilaalka oo dheeraaday.
Sawirro: Markab halis ugu jira inuu ku caariyo dekedda Muqdisho
March 30, 2017 admin154
Markab u raran ganacsato Soomaaliya ayaa qarka u saaran inuu ku caariyo dekada Muqdisho, dadaal badan ayaa loogu jiraa sidii loo badbaadin lahaa markabkaan. Markaan ayaa sida ilaa 500 tan, waana markii labaad oo sidaan ay ku dhacdo muddo laba todobaad gudahooda ah. Mareeye ku xigeenka dekada oo la hadlay idaacadaha Muqdisho ayaa sheegay in […]
March 29, 2017 admin163
Markii ugu horeysay muddo 10 sano ah ayaa duulimaadyo toos ah ka bilowday Muqdisho iyo Nairobi. Ra’iisulwasaaraha Soomaaliya ayaa xariga ka jaray duulimaadka, waxaana diyaaradda African Airways ay 49 qof ka qaaday garoonka diyaaradaha Aadan Cadde, iyadoo toos uga dagtay garoonka Jomo Kenyata. Diyaaradaha ayaa hadda kadib aan mari doonin Wajeer oo ay rakaabku dhib […]
March 29, 2017 March 29, 2017 admin176
Maamulka Ahlusunno Gobolada Dhexe ayaa war-saxaafadeed kasoo saaray doorashada Madaxweynaha Galmudug ee la filayo in dhawaan ay ka dhacdo Magaalada Cadaado. War-saxaafadeedkan ayaa yimid kadib markii barlamaanka Galmudug uu go’aamiyey in 10 April la qabto doorashada Madaxweynaha Galmudug.
Dabley Hubeysan oo dad ku dilay Cabudwaaq
March 29, 2017 admin164
Labo Qof ayaa ku dhimatay Sadex kalana waa ay ku dhaawacmeen Shaqaaqo kadhacdey Magaalada Caabudwaaq ee gobolka Galgaduud. Labada Qof ee dhimatay ayaa midkood loo dilay aano qabiil halka kan kalana rasaastii loowadey uu kudhintay Labada Ruux ee dhimatay ayaa lagu kala magacaabaa Burhaan Diiriye iyo Aadan Cilmi Xirsi. Ilaa sadex Ruux oo kale oo […]
March 29, 2017 admin162
Ra’iisulwasaaraha Soomaaliya Mudane Xasan Cali Kheyre ayaa golaha wasiirada cusub maanta horgeeyey Barlamaanka Soomaaliya. Waxaana Kheyre halkaas ka jeediyey Barnaamijka Xukuumadda cusub, oo ay ugu muhiimsaneyd La dagaalanka musuqmaasuqa, sugidda amniga iyo hirgalinta doorasho qof iyo cod. Waxaana fadhiga joogay 241 xildhibaan. Intaas kadib ayaa xukuumadda waxaa loo qaaday codka kalsoonida, natiijada ayaa waxaa ku […]
March 28, 2017 admin152
Golaha wasiirada cusub ayaa la filayaa in Berri oo arbaco ah uu Ra’iisul Wasaare Xasan Cali Kheyre horgeryo Barlamaanka Soomaaliya. isagoo u waydiin doona in ay siyaan Codka kalsoonida. Tirada Rasmiga ah ee ay Codka kalsoonida ku heli karaanna waa 139 cod. Kulanka Golaha shacabkana waxa Shir Guddoomin doono Cabdi Wali Muudey Guddoomiye ku xigeenka […]